ကရာတေး (karate 空手) နှင့် ကရာတေးဒို (karate-do 空手道) နှစ်မျိုးစလုံးသည် သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့သူ ကောင်းမွန်ကြသည်။ "Sport karate" ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ "Karate-do" ပဲဖြစ်ဖြစ် စစ်မှန်သော နည်းစနစ်များ၊ အစွမ်းထက်သောပညာများ၊ အခြေခံယဉ်ကျေးမှု လူ့တန်ဖိုးများ ပါဝင်ဖို့တော့လိုသည်။ ထိုနည်းတူ "Powerful karate" လို့ပဲပြောပြော၊ "Combative karate" လို့ပဲပြောပြော၊ "Real karate" လို့ပဲပြောပြော၊ Originated karate လို့ပဲပြောပြော စစ်မှန်သောနည်းစနစ်များ၊ အစွမ်းထက်သောပညာများ၊ အခြေခံယဉ်ကျေးမှု လူ့တန်ဖိုးများ ပါဝင်ဖို့လိုသည်။ အကယ်၍ စစ်မှန်သောနည်းစနစ်များ၊ အစွမ်းထက်သော ပညာရပ်၊ ယဉ်ကျေးမှုလူ့တန်ဖိုးများ မပါဝင်သော မည်သည့် karate (ကရာတေး) ဖြစ်စေ၊ မည်သည့် karate-do (ကရာတေးဒို) ဖြစ်စေ တင့်တယ်ကောင်းမွန်မည် မဟုတ်ချေ။ Doing bad things, easy to anger, malice, hatred, belligerence, boastfulness, brutality နှင့် arrogance စသော မကောင်းမှုများကိုသာ ပြုမူနေပါက ထိုသူများသည် ကရာတေး နှင့် မထိုက်တန် ဟု နားလည်ရပါမည်။ အမုန်းတရားရှိသူများ၊ ယဉ်ကျေးမှုမရှိသူများ၊ ရန်လိုသူများ နှင့် စော်ကားလိုသူများ ၊ မောက်မာသူများသည် ကရာတေး နှင့် မထိုက်တန် ဟု နားလည်ရပါမည်။ The essence of karate is to be humble and not to be arrogant. The essence of karate is to be humble and not to be belligerent. 
ကရာတေးလက်နက်မဲ့ ခုခံကာကွယ်ခြင်းမှာ မိမိအနေဖြင့် တိုက်ခိုက်သူ၏ မမျှော်လင့်နိုင်သော တိုက်ခိုက်မှုကို ရုတ်တရက် လျှင်မြန်စွာ ရှောင်တိမ်းကာ ၎င်းတိုက်ခိုက်သူ ရန်သူအား မိမိကို ဆက်လက်မတိုက်ခိုက်နိုင်စေရန် ချက်ချင်း ပြန်လည် ခုခံထိန်းချုပ်ကာကွယ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ မိမိမှ ကြိုတင်တိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်ပဲ မိမိအား လာရောက်ထိပါးမှသာ တုံ့ပြန်ကာကွယ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ There is no first attack in Karate " 空手に先手なし " (Karate ni sente nashi) ဖြစ်သည်။ Combative ကရာတေး တတ်လျှင် မိမိထက် အင်အား ဗလ သာသည်လည်းဖြစ်စေ၊ လက်နက်သာသည်လည်းဖြစ်စေ၊ တယောက်ထက်များသည့် ရန်သူကိုလည်းဖြစ်စေ ကောင်းစွာ ခုခံကာကွယ်တန်ပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်သည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဖြစ်စေ၊ လူတိုင်းဖြစ်စေ၊ ကရာတေးကိုယ်ခံပညာရပ်ကိုသင်ကြားလေ့ကျင့်နိုင်ကြသည်။ COMBAT Karate တွင် မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှု (Self-confidence )၊ နိမ့်ချစိတ်ရှိခြင်း (Humility)၊ ခွန်အား(Strength) ၊ အမြန်နှုန်း(Velocity)၊ သက်လုံ(Stamina)၊ အာရုံစူးစိုက်မှု (Concentration) နှင့် နည်းစနစ်(Technique/Method) တို့သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အဓိကအရေးကြီးသောအရာများဖြစ်သည်။
ကရာတေး ကိုယ်ခံပညာ ဆိုသည်မှာ မိမိ၏ လုံခြုံမှုအတွက် ခုခံကာကွယ်သော နည်းပညာ များကိုဆိုလိုသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုယ်လုံပညာဟုလည်းခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲကြသည်။ မည်သူမဆို မိမိ၏အသက်၊အရှက်၊လုံခြုံမှုကို ထိပါးနှောက်ယှက်လာလျှင် ခုခံကာကွယ်ခွင့် (The Right to Equal Protection or The right of self-defense) ရှိပေရာ ခုခံကာကွယ်မှုနည်းပညာများသည်လည်း နိုင်ငံအလိုက် လူမျိုးစုအလိုက် အမျိုးမျိုး ပေါ်ထွန်းလာကြပေသည်။ The right of self-defense (also called, when it applies to the defense of another, alter ego defense, defense of others, defense ofathird person) is the right for persons to use reasonable force or defensive force, for the purpose of defending one's own life or the lives of others, including, in certain circumstances, the use of deadly force. ကိုယ်ခံပညာအနေဖြင့် မိမိအား နှောက်ယှက်ထိပါး စော်ကားသူများအား အချိန်မဆိုင်းပဲ ချက်ချင်း ခုခံကာကွယ်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ပေရာ မိမိအနေဖြင့် လက်ချည်းသက်သက်(လက်နက်မဲ့) ခုခံကာကွယ်ခြင်း၊ နီးစပ်ရာ လက်နက်ဖြင့် ခုခံကာကွယ်ခြင်း ၊ ကြိုတင်စီမံထားသော လက်နက်ဖြင့် ခုခံကာကွယ်ခြင်း စသည်ဖြင့် အမျိုးအစား ခွဲခြားနိုင်ပေသည်။ မိမိ၏အသက်၊အရှက်၊လုံခြုံမှုအတွက်နှင့် မိမိ၏တိုင်းပြည်၊လူမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာအတွက် ကရာတေး ကိုယ်ခံပညာ (karate's explosive power, combative ကရာတေး- စစ်ပညာ) ကို ၁၀၀% အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။ ကရာတေးကိုယ်ခံပညာမှာ လာရောက်ထိပါးသူများကိုသာမိမိအနေဖြင့် ခုခံကာကွယ်တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းထိပါးသူများအား အကျိုးနစ်နာစေရန် ရည်ရွယ်တိုက်ခိုက်ခြင်း မရှိရပေ။ The laws on self-defense vary from one event to another event, but in general you're allowed to use reasonable physical force to protect yourself from imminent or immediate physical injury. You can only use that amount of force that's necessary to stop the threat of harm. The other person lunges at you or tries to punch you, kick you, you can protect (counter attack) yourself by fighting back. If you fight back and the other person gives up or is unable to defend himself, you do NOT continue to hit him - it's an unreasonable use of force.  ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ (၁၉၀) ကျော်တွင်၊ လူဦးရေ (သန်း၅၀ ကျော်) သည် လက်နက်မဲ့ကရာတေး ကိုယ်ခံပညာရပ်ကိုလေ့ကျင့်နေကြသည်။ ကရာတေး ကစားခြင်းမှ စွမ်းရည် အသစ်အကျိုးကျေးဇူးများကို တိုးပွားလာစေနိုင် သလို မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှု (Self-confidence ) ကိုလည်း တည်ဆောက်နိုင်စေပါသည်။
ယခုလက်ရှိတွင် ကရာတေးကို တိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်သောနည်းကို အဓိကထားပြီး ၊ မူလစတင်ခဲ့သော “အိုကီနာဝါ” ကရာတေး ကို “တိုရိတဲ” ဟုခေါ်သည့် သွယ်ဝိုက်သော တိုက်ခိုက်နည်း၊ ပစ်ပေါက်နည်းတို့ ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ရှေးယခင်က ကရာတေးအပြင် တုတ်ရှည်၊ ဓားရှည်၊ မြန်မာပြည်တွင် နံချပ်ကူ ဟု လူသိများသော တုတ်ချောင်းတိုနှစ်ချောင်းကို ကြိုးနှင့်ဆက်ထားသည့် လက်နက်များကိုလည်း အသုံးပြု လာကြသည်။ ယခုခေတ်တွင်မူ ရှေးရိုးရာတွင် နည်းပညာသစ်များကို ထပ်မံပေါင်းစပ်ကာ ပိုမိုတိုးတက်သော ကစားကွက်များကို တီထွင်လာလျှက်ရှိနေပါသည်။ ကီ ki (気) energy (or) mood သွင်းခြင်းကိုလည်း အသုံးပြု ကြသည်။ အော်ဟစ်တိုက်ခိုက်ခြင်း Kiai (気合) (karate shouts) ကိုလည်း အသုံးပြု ကြသည်။
↑ Gichin Funakoshi, the founder of modern karate-do[လင့်ခ်သေ]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကရာတေးဒို&oldid=692539" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၆:၄၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။